Izindaba - inzalo yokupakisha okuguqukayo
Imikhiqizo yokupakisha eguquguqukayo ibhekisa ekusetshenzisweni kwezinto ezithambile ezifana namafilimu epulasitiki asezingeni eliphezulu noma ama-foil ensimbi kanye namafilimu awo ahlanganisiwe ukwenza izikhwama noma obunye ubuqukathi beziqukathi. Ku-aseptic yezentengiso, ukudla okuhlanganisiwe okungagcinwa ekamelweni lokushisa. Inqubo yokucubungula nendlela yobuciko iyafana namakani wensimbi okugcina ukudla. Iziqukathi ezijwayelekile zokupakisha zifaka izinkomishi zepulasitiki namabhodlela epulasitiki. Izikhwama zokupheka, amabhokisi, njll.
Ngoba umehluko ophansi wengcindezi ovumelekile wento yokupakisha eguquguqukayo incane kakhulu, ingcindezi esitsheni ngesikhathi senqubo yokuvala inzalo kulula kakhulu ukuqhuma ngemuva kokukhuphuka kwezinga lokushisa. Isici sesikhwama sokupheka ukuthi siyesaba ukukhuphuka hhayi ingcindezi; nezinkomishi zepulasitiki namabhodlela bobabili bakwesaba ukukhuphuka nengcindezi, ngakho-ke kuyadingeka ukusebenzisa inqubo yokubuyisa ingcindezi yokubuyisa inzalo. Le nqubo inquma ukuthi izinga lokushisa lokuvala inzalo nengcindezi yodaka kudinga ukulawulwa ngokwehlukile ekukhiqizeni ukufakwa okuguquguqukayo Imishini yokuvala inzalo, efana nohlobo lwamanzi agcwele (uhlobo lwamanzi okugeza), uhlobo lwesifutho samanzi (isifutho esiphezulu, isifutho sohlangothi, isifutho esigcwele), umusi nomoya wokuxutshwa kohlobo lokuvala inzalo, imisa imingcele ehlukahlukene nge-PLC yokulawula okuzenzakalelayo.
Kufanele kugcizelelwe ukuthi izinto ezine zensimbi zingalawula inqubo yokuvala inzalo (izinga lokushisa lokuqala, izinga lokushisa lokuvala inzalo, isikhathi, izinto ezibalulekile) ziyasebenza nasekulawuleni inzalo kokudla okuhlanganisiwe okuguquguqukayo, nengcindezi ngesikhathi sokuvala inzalo kanye nenqubo yokupholisa kumele kulawulwa ngokuqinile.
Ezinye izinkampani zisebenzisa ukuvala inzalo yokufaka inzalo yokupakisha okuguqukayo. Ukuze uvimbele ukuqhuma kwesikhwama sokupheka, mane nje ufake umoya ocindezelwe ebhodweni lokuvala inzalo ukufaka umfutho wokucindezela emuva esikhwameni sokupakisha. Lo mkhuba ongalungile ngokwesayensi. Ngoba inzalo ye-steam yenziwa ngaphansi kwezimo ze-steam ezimsulwa, uma kukhona umoya ebhodweni, kuzokwakhiwa isikhwama somoya, futhi lo msizi womoya uzohamba ebhodweni lokuvala inzalo ukwakha izindawo ezithile ezibandayo noma izindawo ezibandayo, okwenza izinga lokushisa lokuvala okungalingani, okuholela ekutheni inzalo enganele yemikhiqizo ethile. Uma kufanele ungeze umoya ocindezelweyo, udinga ukufakelwa ifeni enamandla, futhi amandla alo fan aklanywe ngokucophelela ukuvumela umoya ocindezelweyo ukuthi usatshalaliswe ngenkani ngumuntu onamandla amakhulu ngemuva kokungena ebhodweni. Ukugeleza komoya ne-steam kuhlanganisiwe, Ukuze kuqinisekiswe ukuthi izinga lokushisa ebhodweni lokuvala inzalo lifana, ukuqinisekisa umphumela wokuvalwa komkhiqizo.